Ganateewwan DataPilot uumuu
Qaree hammangaa man'eelee gatiiwwan baatanii,tarree fi irraantota sarjaa keessatti qubachiisi.
Deetaa - DataPilot - Jalqaba filadhu. QaaqniMadda filadhu ni mul'ata. Filannoo ammee filiitii TOLE dhaan mirkaneessi. Irraantowwan gabatee qaaqa DataPilot keessatti akka qabduuwwaniitti mul'atu. Qabduuwwan kunneen akka barbaadametti harkisiitii bal'inoota teessumaa "Dirreewwan Fuulaa", "Dirreewwan Sarjaa", "Dirreewwan Tarree" fi "Dirreewwan Deetaa" irra kaa'i.
Qabduuwwan barbaadde bal'inoota afran keessaa tokko irratti harkisi.
Qabduu fi sanduuqa tarree gubbaa gabatee datapilot irratti uumuuf qabduu gara bal'ina Dirreewwan Fuulaa harkisi.Sanduuqni tarree qabiyyeewwan waanta filatameetiin gabatee datapilot gingilchuuf fayyaduu danda'a.Dirree fuulaa biraa akka gingilchaatti fayyadamuuf gabatee datapilot uumame keessatti harkisii-kaa'I fayyadamuu dandeessa.
Yoo qabduun bal'ina Dirreewwan Deetaa keessa bu'e goodayyaa kan foormulaa deetaa shallaguuf fayyadamnu mul'isuuf kennama.
Dirreewwan bal'ina Dirreewwan Deetaa keessa jiran keessaa tokko lamcuqaasuudhaan qaaqa Dirree Deetaa waamuu dandeessa.
Tartiibni qabduuwwanii yeroo kamiyyuu qabduuwwan bal'ina keessatti gara qubannoo biraa hantuuteen deemsisuudhaan jijjiiramuu danda'a.
Duubatti gara mirga qaaqa bal'ina qabduuwwan birootti harkissudhaan qabduu balleessi.
TOLE tuquudhaan qaaqa DataPilot dhaamsi.Qabduun Gingilchi amma ni saagama,ykn qabduu fuulaa dirree deetaa kan ati bal'ina Dirreewwan Fuulaa keessa buuste maraaf.Gabateen DataPilot gad fagaateetu saagama.
Title is: Ganateewwan DataPilot uumuu